Blacksad. Zvese zvinodonha, naJuanjo Guardido naJuan Díaz Canales. Wongororo | Current Literature
Blacksad. Zvese zvinodonha, naJuanjo Guardido naJuan Díaz Canales. Ongorora
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 23/11/2021 12:00 | Comics, Nhema nhema
Blacksad 6. Zvese Zvinodonha - Chikamu Chekutanga ndiyo nyaya itsva yavanopa Juanjo Guarnido muchengeti wemufananidzo (kudhirowa) uye Juan Diaz Canales (script) yeizvi detective katsi kubva kuma50s uyo atosvitsa makore makumi maviri. Uye ihwo humbozha, sezvakaita dzakapfuura. Ndakatotaura nezvavo naiye, saka nhasi ndinotarisisa nezvekupedzisira. Izvi ndezvangu ongorora.
1 Blacksad 6. Zvese Zvinodonha - Chikamu Chekutanga - Ongorora
1.1 Chii chiri pamusoro uye mavara ayo
Blacksad 6. Zvese Zvinodonha - Chikamu Chekutanga - Ongorora
Pakutanga kwe Blacksad 6. Zvese Zvinodonha - Chikamu Chekutanga tinoona nyemwerero yesardonic ya garwe declaiming zvirevo zve Dutu, naWilliam Shakespeare. Ndiyo nyanzvi yekutanga, semamwe mavignettes kusvika kumagumo. Pamusoro pazvo zvese, nyaya inotanga nemazwi aya anotungamirwa naJohn Blacksad, mukutaura kwake kwemunhu wekutanga kubva pakutanga kwenhevedzano na. Nzvimbo mumumvuri.
Hupenyu uhu hachisi chinhu chinopfuura kuratidzwa chimwe chinhu chatinoziva isu tese. Uye ini, pasina chero basa, ndave dhirama rehunyanzvi. Vateereri uye mutambi ane bhawa rakavhurika rezvishuwo zvakaderera uye kusuruvara kwevanhu. Vakatambudzwa uye vane mavara vakomana ndivo vandinoshanda navo. Nepanorama yakadai, handisi kunzwisisa kuti sei ndichiri kufarira theatre.
Uye zvechokwadi, zvakanaka, haupfuurire sei? Iwe unofanirwa kuzviita nekuti iwe unongoziva kuti uchaverenga uye kuona imwe inotyisa nyaya neiyi (chidimbu che) mutikitivha katsi. Zvishoma zvakawaniswa mumakore 20 aya okuvapo, chokwadi, nokuti hunguAngotiudza nyaya 6 chete, asi dzakaita sei! Uye iyo yekupedzisira, mukuwedzera, iri mukati 2 zvikamu. Yechipiri yakarongerwa 2023, chimwe chinhu chichafanirwa kutendwa nekuti inenge isiri iyo 8 iyo yatora.
Asi zvinoratidzwa zvakare kuti vanyori vavo vanotora nguva yakareba nekuti imwe neimwe idombo. Zvino, nekupatsanurwa uku, nyaya yacho inobuda zvakadzikama uye ine hunyanzvi. Izvi zvinogona kuvonekwa uye kucherechedzwa kwete chete mumifananidzo yakadzama, mune mamwe mavignettes ari chaizvo cinematographic shots, asiwo mune script naDíaz Canales uyo, kune rumwe rutivi, anoenderera mberi nekuishongedza.
Izvo zvinoitikawo kuti iye naGuarnido pamwe chete nenguva iyoyo vanga vachiumba nekunatsiridza zvisikwa zvavo pa album itsva yese. Senguva dzose, pachava nevaya vane zvavanoda, asi vose vakanaka, kunyange zvazvo zvinokurudzirwa kuziva katsi iyi kubva pakuberekwa.
Pachave zvakare nevaya vanodana iyi nyaya - kana iyo yese nhevedzano - zvakare inofanotaurwa kana kutambudzwa ne clichés, asi ndizvozvo. cliches inoshanda, kunyanya mumhando iyi.
Blacksad yakaoma seyerudo, a mutero wakakwana kuna Noir zvimwe zvekare, zvose zvinyorwa uye cinematographic, kubva kune aesthetics kusvika kune zvinyorwa, uye, kunyanya, kuNorth America. Kunyura mumapeji aro kuzviitira mukati Kutsveyamisa, Kurara Kwekusingaperi, Kuparara, Nzira Yakasviba, kana Vapanduki, kwavanoyambuka Philip Marlowe yeBogart kana iyo Jeff Bailey naMitchum pa Dzokera kune zvakapfuura. Uye chiuru nechimwe chinonongedzera kune chero zita raakasaina Hammet, Chandler o goodys Kana chero yeaya mafirimu kubva kuzera regoridhe re40s uye 50s mubhaisikopo.
Chii chiri pamusoro uye mavara ayo
En Blacksad 6. Zvese Zvinodonha - Chikamu Chekutanga tine John Blacksad muguta mushure mezviitiko zvekare zvakaitika muAmarillo (Texas), New Orleans kana Las Vegas. Uye kuti kutanga nekuita sekunge kwakadzikama theatre kuita kunotungamira kune chirongwa chehuwori uye zvido zvezvematongerwo enyika munzvimbo dzepamusoro kubatanidza meya, muvaki anokosha uye mutungamiriri wekambani iyoyo yemitambo.
Navo tinavo zvakare pavhiki, mutori wenhau wetabloid uye chinonyanya kusekesa chinhu, pamwe neanopikisa kukomba uye kusimba kweBlacksad. Zvisinei, panguva ino anotamba a inonyanya kukosha uye inogadzirisa basa pamagumo ayo, chokwadi, anosiiwa akavhurika ne Kushamisika kukuru izvo, zvisingafungidzirwe, zvine mhedzisiro shoma. Pane kudaro. Ndiyo yakanyanya kurova, iyo cliffhanger Anglo-Saxon, iyo inosiya huchi pamiromo nezvose zvinotarisirwa uye chido chechikamu ichocho chechipiri.
Chokwadi tinorambawo tichinakidzwa nazvo anthropomorphic character kusikwa kusviba motley Chemhondoro kudedera uye ne kuratidza chiratidzo cheimba yeGuarnido, iyo ine chikwereti chakawanda kuDisney uye, panguva imwe chete, inobvisa zvese zvemwana kana zvisina mhosva halo yekambani yemakonzo.
Hapana chakafanana nea haughty turkey serima mayor Schumann yeNew York haina kumbotaurwa asi inoratidzwa zvakajeka muzvivakwa, migwagwa nemapaki pamwe chete nezana muzana muzana remaguta eAmerica. Uye hapana chakafanana nea hawk nechitarisiko chinopinda uye chine simba kumiririra Solomon, muvaki iyeye anotamba nezvose uye munhu wese kubva pakakwirira izvo pasina mubvunzo zvinotonga nemasikirwo.
Uye kubva kumusoro ikoko tinodzika kusvika pakadzika penyika uko, chokwadika, vashandi varipo zvipfukuto, makonzo kana mbeva murima re metro. Mumiriri wake, Kenneth Clark, ndiye a bat wavanoda kubuda munzira ndosaka achihaya Blacksad, inokurudzirwa na Iris Allen (llama ane nyasha), theatre director uyo Blacksad akadzivirira kunetsana neMapurisa iyo nyaya ino inotanga nayo.
Saka katsi yedu ichaita kunge a mumwe mushandi kuwana uye kumisa hitman (Logan, vanotyisa uye vasina mweya brown bere) ndecheboka remafia rinotonga vamwe weasels, nguva dzose nekudhinda kwakashata uye kuyeuchidza avo ve Ndiani akanyengedza roger tsuro?, imwe nhoroondo yakanaka yakasviba yemubhaisikopo, kunyange zvazvo yakanyanyisa uye yevana.
Tichaonawo kekutanga kunyora kwe Chii New, uko Weekly anoshanda, uye tichasangana yake itsva dhairekita, kutyisa Nungu, iyo yasarudza kubheja pane zvenhau zvinozvipira kupfuura sensationalist.
Zvimwe zvine simba sekondari ndizvo olaf, ane misikanzwa great dane, mutyairi waSoromoni nomufambisi wake, uye Shelby, asinganzwisisiki seagull uyo anoitira rukodzi basa rakasviba zvakanyanya, anorushandisa achityisidzirwa.
Zvese zvakasanganiswa mune iyi theatre cocktail, manejimendi ezvematongerwo enyika uye ebhizinesi masimba uye ekare maakaundi avakamirira. Uye munhu wose kuguma mumamiriro ezvinhu anovhiringidza -Neiyo stellar kutaridzika pamagumo ehunhu hwakakosha hweBlacksad-, iyo inovhura chikamu chechipiri chizere nemanzwiro uye kusimba.
Zvakaipisisa: kuti ivo chete Mapeji 58.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Comics » Blacksad. Zvese zvinodonha, naJuanjo Guardido naJuan Díaz Canales. Ongorora
Salt Anthology, tsamba yakazaruka yekukanganwa